Sheekh Shariif Sheekh Axmed” Shacabka Soomaaliyeed Cadowga Al-shabaab meel ha uga soo wada jeestaan oo gacmaha ha is qabsadaan | Radio SYL
Sheekh Shariif Sheekh Axmed” Shacabka Soomaaliyeed Cadowga Al-shabaab meel ha uga soo wada jeestaan oo gacmaha ha is qabsadaan
Friday March 1, 2019 - 12:26 under Wararka Maanta by Hassan Haykal
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa si kulul u cambaareeyay qaraxyadii xalay ka dhacay Wadada Maka Al-Mukarama, kaasoo dad fara badan ku geeriyoodeen.
Sheekh Shariif ayaa tacsi u diray dadkii ku geeriyooday qaraxyada, waxaana kuwii dhaawacmay uu Alle uga rajeeyay caafimaad degdeg ah.
“Waxaan si adag u cambaareynayaa weerarkaas wuxuushnimada ah aniga oo tacsi u dirayo guud ahaan umadda Soomaaliyeed, waxaan leeyahay walaalihii ku dhintay Allaha u naxariisto, kuwa dhaawacana allaha noo bogsiiyo”ayuu yiri Sheekh Shariif.
Sidoo kale waxaa uu shacabka ugu baaqay inay cadawga ay meel uga soo wada jeestaan, gacmahana la is qabsado
“Waxaan ugu baaqayaa bulshada qaybaheeda kala duwan iyo dowladdaba in gacmaha la isku qabsado sidii cadowgan looga guulaysan lahaa, Dhammaanteed waxaa noo wada wanaagsan Soomaaliya oo xasilloon, gacmaha is haysata una midooba cadowga duullaanka ku ah amniga iyo dowladnimada Soomaaliya”ayuu yiri Sheekh Shariif.
Illaa iyo hadda Madaxda dowladda Federaalka ayaa ka hadlin qaraxyadii xalay ka dhacay wadada Maka Al-Mukarama, iyadoo illaa haatan uu socdo howlgalka Ciidamada ammaanka ka wadaan dhismayaal ay ku jiraan dabley hubeysan.